mardi, 19 mars 2019 19:14
Manandafy Rakotonirina: Mijanona kely eo Ambovombe-Manandriana ny nofomangatsiakany
Niainga teto Ambositra androany tamin’ny 8ora sy sasany maraina ny nofo mangatsiakan’i Manadafy Rakotonirina rehefa avy niaretan-tory teto.
Mijanona kely eo Ambovombe renivohitry ny Distrikan’i Manandriana ny Razana mialoha ny hitondrana azy ao Ambohimahazo, toerana hanafenana azy, rahampitso alarobia.
mardi, 19 mars 2019 19:13
Fifidianana depiote: Kandida miisa 803 no noraketin’ny CENI fa nahafeno fepetra
862 ny isan’ireo antotan-taratasy firotsahan-kofidiana solombavambahoaka voarain’ireo OVEC miisa 119 manerana ny Nosy. Kandida narotsaky ny antoko na vondrona antoko politika ny 345 tamin’ireo, ary mahaleotena na tsy miankina ny 517.
Lehilahy ny 736 (85%) tamin’ireo mpirotsaka hofidiana, raha toa ka 126 (15%) ny vehivavy.
Naharaisana fitarainana miisa 21 tamin’ireo firotsahan-kofidiana ireo. Antotan-taratasy firotsahan-kofidiana miisa 803 no noraketin’ny CENI fa nahafeno fepetra, ny 59 nolavina taorian’ny fizahana natao, satria na voasazin’ny Fitsarana na tsy nandoa ilay anto-bola 5 tapitrisa Ariary na antotan-taratasy tsy feno na taorian’ny 12 martsa 2019 tamin’ny 5 ora hariva, nikatonan’ny fandraisana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana solombavambahoaka vao nanatitra dosie.
mardi, 19 mars 2019 14:28
CAN 2019: Manomboka fanazarantena any Sénégal ny Barea
Efa tonga any Dakar avokoa ireo mpilalaon’ny Barea sy ny delegasionina avy any Paris, sy ireo niainga avy teto Madagasikara, hiatrika ny lalao miverina hifandonana amin’ny Lionan’i Téranga na ekipam-pirenena senegaley amin’ny baolina kitra.
Lalao farany eo amin’ny Fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny laharana voalohany hiatrehana ny ‘’CAN 2019’’ hatao any Egypta ity lalao ity, izay hotanterahina ao amin’ny kianjan’i Lat Dior de Thiès ity amin’ny sabotsy 23 martsa, amin’ny 9ora alina ora eto Madagasikara.
Anio dia efa hitsapa kianja ireo mpilalao malagasy sady maka volontany.
mardi, 19 mars 2019 10:30
Toamasina: Hamboarina sy hatsaraina mba tsy ho mena-mitaha amin’ireo hita any ivelany
Mirefy eo amin’ny 7km eo ny sisin-dranomasina izay voakasik’ity tetikasa lehibe ity : manomboka eo amin’ny seranantsambon’i Toamasina ka mitohy hatreny Salazamay. Hamboarina tanteraka sy hatsaraina mba tsy ho mena-mitaha amin’ireo hita any ivelany ny eto amintsika, hoy ny filoha Andry Rajoelina.
Hanaraka dingana maromaro ny asa fanamboarana. Hanombohana izany ny fanitarana ny lalana ka hasiana lalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra manaraka iny sisin-dranomasina iny.
Voakasik’ity tetikasa ity avokoa ny fampiroboroboana ny fizahantany, ny toekarena, ny tanora sy fanatajahantena.
mardi, 19 mars 2019 10:20
Toamasina - Lalana « autoroute »: « Hatao izay hahavitàna ny asa aingana indrindra », hoy ny filoha Andry Rajoelina
Lalana migodana mirefy 10km, miainga avy eo amin’ny seranantsambo ka mitohy any Tsarakofafa, ary mipàka amin’ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an’Antananarivo ity hamboarina ho lasa « autoroute » ity.
Hatomboka afaka iray volana ny asa, ary hatao izay hahavitàna ny asa aingana indrindra, hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nidina teny an-toerana ny tenany, omaly.
mardi, 19 mars 2019 10:09
Jeneraly Richard Ravalomanana: Nanavotra ain'olona tra-doza
Lehilahy iray no hitan’ny Jeneraly Richard Ravalomanana, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (SEG), nitsirara tsy nahatsiaro tena teo amin'ny arabe lalam-baovao Rocade Tsarasaotra miaraka amin'ny "moto" nentiny, ny 15 martsa 2019 tolakandro, ka nijanona izy hamonjy.
Nakarina tao anaty fiaran’ny SEG ilay tra-doza ary nentiny haingana tao amin'ny OSTIE Anosivavaka ho vonjena. Nahatsiaro tena izy rehefa nahazo ny fitsaboana famonjena nataon'ireo mpitsabo "urgentistes" tao, izay nanao asa maimaimpoana noho ny vonjy aina.
Niala mpandeha an-tongotra iray niampita arabe tampoka no nitarika ny fianjeran’ilay mpitondra moto. Avy any Betroka namita iraka mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny Jeneraly Richard Ravalomanana no sendra olona tra-doza io.
mardi, 19 mars 2019 10:07
Journée mondiale d'action contre la guerre.